पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले किन गरे संसद् भंग ?
इमरानको प्रस्ताव राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत, ९० दिनभित्र चुनाव हुने
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति डा. आरिफ अल्वीले संसद भंग गरेका छन् । आइतबार खानले अचम्मको कदम चाल्दै राष्ट्रपतिलाई संसद भंग गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
पाकिस्तानका राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पाकिस्तानका राष्ट्रपति डा आरिफ अल्वीले संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको सल्लाहलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। यो धारा ५८(१) र ४८ (पाकिस्तानको संविधान) १० अन्तर्गत गरिएको छ।’
अब पाकिस्तानमा आगामी ९० दिनभित्र आम निर्वाचन हुने भएको छ । तबसम्म इमरान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।
आज अर्थात् आइतवार ३ अप्रिलमा इमरान खान सरकारविरुद्ध विपक्षी दलको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने संसद्को कार्यसूची थियो। तर, पाकिस्तानको संसदका उपसभामुख कासिम सुरीले इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्न अस्वीकार गरे । उनले अविश्वासको प्रस्तावलाई असंवैधानिक भन्दै प्रस्ताव नै खारेज गरिदिएका छन् । खानसँग सरकार बचाउने बहुमत थिएन। उनको पार्टी तहरीक–ए–इन्साफका धेरै सांसद पनि विपक्षी क्याम्पमा गएका थिए ।
३४२ सिट भएको संसदमा इमरान खानका १ सय ५५ सांसद थिए । तर, इमरान खानसँग अहिले १ सय ५५ सांसद पनि नभएको बताइएको छ । सहयोगीहरूले पहिले नै उनलाई छाडेको विपक्षीहरुको दाबी छ । विपक्षीहरु संख्यामा अगाडि थिए र अविश्वासको मत आयो भने खानलाई हार्ने डर थियो ।
इमरान खान अहिले संसद भंग गरेर फेरि चुनावमा जाने तयारीमा छन् । पाकिस्तानी मिडियाको रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानमा अब ९० दिनभित्र नयाँ निर्वाचन हुनेछ । पाकिस्तानको संसदका उपसभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि इमरान खानले खुलेर स्वागत गरेका थिए ।
देशलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई वक्ताले खारेज गरेकोमा म सम्पूर्ण समुदायलाई बधाई दिन्छु। पाकिस्तानमा सरकार परिवर्तन गर्ने बाह्य एजेन्डा थियो। यो देशद्रोह भइरहेको देखेर जनता आक्रोशित थिए। समुदाय यस्तो षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिनुहोस्, संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ। मैले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको छु, हामी जनतामाझ जानेछौं र त्यो निर्णय सर्वव्यापी छ।’
‘समुदायले चुनावको लागि तयारी गर्नुपर्छ। चुनावको प्रक्रिया जुनसुकै होस्, त्यो अब सुरु हुन्छ। पाकिस्तानले आज एउटा षड्यन्त्रलाई असफल बनायो।’ खानले थपे ।
पाकिस्तानका धेरै जनताले इमरान खानको यो निर्णयलाई संविधानको उल्लङ्घन भनेका छन् । प्रख्यात पाकिस्तानी पत्रकार हमिद मिरले ट्वीट गर्दै भने, ‘संसदका उपसभामुख कासिम सुरीले संविधानको धारा ५ अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरेका छन्। त्यसपछि इमरान खानले राष्ट्रिय सभा भंग गर्ने घोषणा गरेका छन्। यी सबै संविधान उल्लङ्घन गर्ने निर्णयहरू हुन्। । पीटीआईले पाकिस्तानलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेको छ। यो पाकिस्तानको संविधानमाथिको विश्वासघात हो।’
इमरान खानले अविश्वासको प्रस्तावलाई लिएर राजीनामा नदिने तर अन्तिम बलसम्म लड्ने बताएका थिए । यो स्पष्ट छ कि इमरान खान राजनीतिमा आउनु भन्दा पहिले एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थिए र पाकिस्तान क्रिकेट टीमको कप्तान पनि थिए। इमरान खानले अन्तिम बलसम्म लडेको टिप्पणीमा हमिद मिरले खिल्ली उडाउँदै लेखेका छन्, ‘अन्तिम बलसम्म लड्नुको सट्टा इमरान खान विकेट लिएर मैदानबाट भागे ।’
हामिद मीरले आफ्नो दोस्रो ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशनका अध्यक्ष अहसान भुनले उपसभामुख र प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरेको कुरा एकदमै सहि भन्नु भएको छ। यस मामिलामा सर्वोच्च अदालत अगाडि आउनुपर्छ र पाकिस्तानलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। हामी लोकतन्त्र चाहन्छौं, मार्शल ल होइन।’
भारतका लागि पाकिस्तानका उच्चायुक्त अब्दुल बासितले ट्वीट गर्दै भने, ‘स्थिति राम्रो छैन। यद्यपि चुनाव सम्भवतः सही तरिका हो। सबै राजनीतिक दलहरूले यो माग गरिरहेका थिए।’
अर्कोतर्फ, जियो न्यूजका पत्रकार मुर्तजा अली शाहले भिडियो क्लिप ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘पाकिस्तानका डेपुटी महान्यायाधिवक्ता राजा खालिदले राजिनामा दिनुभएको छ, इमरान खान सरकारले पाकिस्तानको संविधानसँग छेडछाड गरेको छ। इमरान खान कुनै तानाशाह थिएनन्। उनले संविधानको लागि जे गरे त्यो गरे, जे भयो त्यो अवैध र असंवैधानिक हो।’
आफ्नो दोस्रो ट्वीटमा मोर्तजाले लेखेका छन्, ‘संसद् विघटनपछि पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका छन् ।’
जिन्नामाथि किताब लेख्ने लेखक यासिर लतिफ हमदानीले ट्वीट गरेका छन्, ‘यो संविधानको विरुद्धमा भएको कूपभन्दा कम होइन। मुशर्रफको विपरीत, इमरान खान एक नागरिक हुन्। मलाई उनको भविष्यको डर छ।’
पाकिस्तानका प्रसिद्ध पत्रकार सैयद तलत हुसैनले लेखेका छन्, ‘पाकिस्तान एक आणविक शक्ति राष्ट्र हो। इमरान खानले एक कार्यकारी अधिकार विघटन गरेर सम्पूर्ण प्रणालीलाई पक्षाघात बनाएका छन्। केन्द्रमा अहिले कोही प्रमुख कार्यकारी छैनन् र पूरा भए पनि यो कतिपयमा विवादित छ। पञ्जाबमा मन्त्रिमण्डल छैन र मुख्यमन्त्री पनि छैन, एक व्यक्तिले पुरै देशलाई अपहरण गरेको छ ।’
नयाँ दौरमा पाकिस्तानी मिडियाका कार्यकारी सम्पादक मुर्तजा सोलाङ्गीले लेखेका छन्, ‘विपक्षीहरूले संख्यात्मक बलको आधारमा इमरान खानलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेका थिए। इमरान खानका विद्रोही सांसदको पनि आवश्यकता छैन। तर पाकिस्तानी ट्रम्पले आफ्नो भोली ट्रम्प कार्ड दिएका छन्। भगवान बचाऊ१ इमरान खानले देशलाई धोका दिएका छन्, यो व्यक्ति वास्तविक देशद्रोही हो।’
तर, इमरान खानको निर्णयको सबैले विरोध गरिरहेका छन् भन्ने होइन । जनताले पनि इमरान खानको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन् । पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीका पूर्व प्रशिक्षक तथा कप्तान वकार युनिसले लेखेका छन्, ‘कप्तान सधैं तपाईमा गर्व छ। कस्तो मास्टरस्ट्रोक।’
यसका साथै इमरान खानको पार्टीका नेताहरूले पनि यो निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।
पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाजकी नेतृ र पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफकी छोरी मरियम नवाजले ट्वीट गरेकी छन्, ‘कसैलाई पनि पाकिस्तानको संविधानसँग छेडछाड गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन। यदि यो स्वार्थी व्यक्तिलाई सजाय दिइएन भने, त्यहाँ कुनै नियम छैन।’
अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि इस्लामावादमा कर्फ्यू लगाइएको थियो । सबै सुरक्षा निकायलाई सजग राख्दै संसदको वरिपरि तीन हजार प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । संसद्तर्फ जाने बाटो पनि कन्टेनर राखेर बन्द गरिएको थियो । यसका साथै रेन्जर्सलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो ।
एकातिर इमरान खानका समर्थक राजधानीमा पुग्ने डर थियो भने अर्कोतिर विपक्षी समर्थकबाट प्रदर्शनको सम्भावना रहेकोले यस्तो गरिएको हो । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि वा पछि हिंसाको आशंका पनि गुप्तचर निकायले गरेका थिए । तर, अहिले स्थिति सामान्य रहेको छ ।